10 O si n’ebe ahụ bilie wee bịa n’ókèala Judia na n’ofe Jọdan, ìgwè mmadụ wee gbakọta ọzọ n’ebe ọ nọ, ọ malitekwara ọzọ izi ha ihe dị ka ọ na-eme mgbe niile.+ 2 Ndị Farisii wee bịa malite ịjụ ya ma iwu ọ̀ kwadoro nwoke ịgba nwunye ya alụkwaghịm. Nke a bụ iji lee ya ule.+ 3 Ọ zara ha, sị: “Gịnị ka Mozis nyere unu n’iwu?” 4 Ha wee sị: “Mozis nyere ohere maka ide akwụkwọ nchụpụ na ịgba ya alụkwaghịm.”+ 5 Ma Jizọs sịrị ha: “Ọ bụ n’ihi na obi kpọrọ unu nkụ+ ka o ji deere unu iwu a. 6 Otú ọ dị, malite n’oge e kere ihe, ‘O kere ha nwoke na nwaanyị.+ 7 N’ihi ya, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya, 8 ha abụọ ga-abụkwa otu anụ ahụ́’;+ nke mere na ha abụkwaghị anụ ahụ́ abụọ, kama otu anụ ahụ́. 9 Ya mere, ihe Chineke kekọtara, mmadụ ọ bụla atọsala ya.”+ 10 Mgbe ọ nọ ọzọ n’ụlọ,+ ndị na-eso ụzọ ya malitere ịjụ ya ajụjụ banyere nke a. 11 O wee sị ha: “Onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, wee lụọ nwunye ọzọ, na-akwa iko+ ma na-emejọ ya, 12 ọ bụrụkwa na nwaanyị alụọ di ọzọ, mgbe ọ gbasịrị di ya alụkwaghịm, ọ na-akwa iko.”+ 13 Ndị mmadụ wee malite ịkpọtara ya ụmụntakịrị ka o bitụ ha aka; ma ndị na-eso ụzọ ya baara ha mba.+ 14 Mgbe Jizọs hụrụ nke a, o were iwe wee sị ha: “Hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m; unu anwala igbochi ha, n’ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otú ahụ.+ 15 N’ezie, ana m asị unu, Onye ọ bụla nke na-anabataghị alaeze Chineke dị ka nwatakịrị agaghị aba n’ime ya ma ọlị.”+ 16 O kukwaara ụmụaka ahụ wee malite ịgọzi ha, na-ebikwasị ha aka n’isi.+ 17 Ka ọ na-apụ, otu nwoke gbakwuuru ya ma gbuo ikpere n’ala n’ihu ya wee jụọ ya, sị: “Ezi Onye Ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi?”+ 18 Jizọs sịrị ya: “Gịnị mere i ji akpọ m ezi onye?+ Ọ dịghị onye bụ́ ezi onye, ma e wezụga otu onye, ya bụ, Chineke.+ 19 Ị maaranụ ihe ndị e nyere n’iwu, ‘Egbula ọchụ,+ Akwala iko,+ Ezula ohi,+ Agbala akaebe ụgha,+ Erigbula mmadụ,+ Sọpụrụ nna gị na nne gị.’”+ 20 Nwoke ahụ sịrị ya: “Onye Ozizi, m na-edebe ihe a niile malite mgbe m bụ nwata.” 21 Jizọs legidere ya anya ma nwee ịhụnanya n’ebe ọ nọ wee sị ya: “Ọ dị otu ihe ị ka ga-eme: Gaa, ree ihe ndị i nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ̀ n’eluigwe, bịakwa bụrụ onye na-eso ụzọ m.”+ 22 Ma okwu ahụ wutere ya, o wee lawa ná mwute, n’ihi na o nwere ọtụtụ ihe onwunwe.+ 23 Mgbe Jizọs legharịchara anya, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Lee otú ọ ga-esi siere ndị nwere ego ike+ ịba n’alaeze Chineke!”+ 24 Ma ihe o kwuru juru ndị na-eso ụzọ ya anya.+ Jizọs zara ha ọzọ, sị: “Ụmụntakịrị, lee otú o si bụrụ ihe siri ike ịba n’alaeze Chineke! 25 Ọ dịịrị kamel mfe isi n’anya agịga gafere karịa ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.”+ 26 Ma o jukwuru ha anya, ha wee sị ya: “Ònye, n’ezie, ka a pụrụ ịzọpụta?”+ 27 Jizọs legidere ha anya wee sị: “N’ebe ụmụ mmadụ nọ, ọ gaghị ekwe omume, ma ọ dịghị otú ahụ n’ebe Chineke nọ, n’ihi na ihe niile kwere omume n’ebe Chineke nọ.”+ 28 Pita malitere ịsị ya: “Lee! Anyị hapụrụ ihe niile, anyị anọwokwa na-eso gị.”+ 29 Jizọs sịrị: “N’ezie, ana m asị unu, Ọ dịghị onye hapụrụ ụlọ ma ọ bụ ụmụnne ndị ikom ma ọ bụ ụmụnne ndị inyom ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ ụmụ ma ọ bụ ubi n’ihi m nakwa n’ihi ozi ọma ahụ,+ 30 nke na-agaghị enweta ugbu a, n’ime oge a, okpukpu otu narị+ ụlọ na ụmụnne ndị ikom na ụmụnne ndị inyom na nne na ụmụ na ubi, tinyere mkpagbu,+ nwetakwa ndụ ebighị ebi n’usoro ihe na-abịanụ.” 31 Otú ọ dị, ọtụtụ ndị bụ́ ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ, ndị ikpeazụ ga-abụkwa ndị mbụ.”+ 32 Ugbu a, ha na-aga n’okporo ụzọ ka ha gbagoo Jeruselem, Jizọs nọkwa ha n’ihu, o wee ju ha anya; ma ndị so ha malitere ịtụ egwu. Ọ kpọpụkwara mmadụ iri na abụọ ahụ n’akụkụ wee malite ịkọrọ ha ihe ndị a a kara aka ga-adakwasị ya:+ 33 “Lee, anyị na-agbago Jeruselem, a ga-enyefekwa Nwa nke mmadụ n’aka ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ, ha ga-amakwa ya ikpe ọnwụ, ha ga-enyefekwa ya n’aka ndị mba ọzọ,+ 34 ha ga-ejikwa ya mee ihe ọchị, gbụọ ya ọnụ mmiri, pịakwa ya ihe ma gbuo ya, ma mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ ga-ebili.”+ 35 Jems na Jọn, ụmụ abụọ Zebedi,+ jekwukwaara ya, sị ya: “Onye Ozizi, anyị chọrọ ka i meere anyị ihe ọ bụla anyị ga-arịọ gị.”+ 36 O wee sị ha: “Gịnị ka unu chọrọ ka m meere unu?” 37 Ha sịrị ya: “Kwe ka anyị nọdụ ala, otu onye n’aka nri gị, otu onye n’aka ekpe gị, mgbe ị ga-anọ n’ebube gị.”+ 38 Ma Jizọs sịrị ha: “Unu amaghị ihe unu na-arịọ. Ùnu pụrụ ịṅụ iko nke m na-aṅụ, ka ùnu pụrụ ịbụ ndị e mere baptizim ahụ a na-eme m?”+ 39 Ha wee sị ya: “Anyị pụrụ ịṅụ ya.” Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ha: “Unu ga-aṅụ iko ahụ m na-aṅụ, a ga-emekwa unu baptizim ahụ a na-eme m.+ 40 Otú ọ dị, ọ bụghị m na-eme ka a nọdụ n’aka nri m ma ọ bụ n’aka ekpe m,+ kama ọ dịịrị ndị a kwadebeere ya.” 41 Otú ọ dị, mgbe mmadụ iri ndị nke ọzọ nụrụ banyere ya, ha malitere iweso Jems na Jọn iwe.+ 42 Ma mgbe Jizọs kpọrọ ha ka ha bịakwute ya, ọ sịrị ha: “Unu maara na ndị e weere na ha bụ ndị na-achị ndị mba ọzọ na-eme ha ka ọ̀ bụ ha nwe ha, ndị ukwu ha na-achịkwa ha n’aka ike.+ 43 O kwesịghị ịdị otú ahụ n’etiti unu; kama onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye ukwu n’etiti unu aghaghị ịbụ onye na-ejere unu ozi,+ 44 onye ọ bụla nke na-achọkwa ịbụ onye mbụ n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu nke mmadụ niile.+ 45 N’ihi na ọbụna Nwa nke mmadụ bịara, ọ bụghị ka e jeere ya ozi,+ kama ka o jee ozi, ka o nyekwa mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta+ n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ.”+ 46 Ha wee bata Jeriko. Ma mgbe ya na ndị na-eso ụzọ ya na ìgwè mmadụ dị ukwuu si na Jeriko na-apụ, Batimiọs (nwa Timiọs), bụ́ onye arịrịọ nke kpuru ìsì, nọ ọdụ n’akụkụ okporo ụzọ.+ 47 Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jizọs onye Nazaret, ọ malitere iti mkpu, sị: “Jizọs, nwa Devid,+ meere m ebere!”+ 48 Ọtụtụ ndị wee malite ịgwasi ya ike ka o mechie ọnụ; ma ọ nọ na-etisikwu mkpu ike, sị: “Nwa Devid, meere m ebere!”+ 49 Jizọs wee kwụsị, sị: “Kpọọnụ ya.” Ha wee kpọọ nwoke ahụ kpuru ìsì, sị ya: “Nwee obi ike, bilie, ọ na-akpọ gị.”+ 50 O yipụrụ uwe elu ya, malie guzoro ọtọ ma gakwuru Jizọs. 51 Jizọs wee sị ya: “Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?”+ Nwoke ahụ kpuru ìsì wee sị ya: “Rabonaị, mee ka m hụwa ụzọ.”+ 52 Jizọs wee sị ya: “Lawa, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.”+ O wee hụwa ụzọ ozugbo,+ malitekwa iso ya n’okporo ụzọ.+